Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IiPhilippines News Breaking » Inyikima Yamandla Enamandla KwiiPhilippines
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • IiPhilippines News Breaking • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kwiintsuku ezisi-7 ezidlulileyo, iPhilippines iye yashukunyiswa yinyikima eyi-1 enobukhulu obungu-7.0, inyikima enye eyi-1, iinyikima ezi-5.1 phakathi kwe-5 kunye ne-4.0, iinyikima ezingama-5.0 phakathi kwe-35 kunye ne-3.0, ne-4.0 phakathi kwe-187 ne-2.0.
Akukho micimbi yesilumkiso ngeTsunami
Inyikima eyomeleleyo yasePhilippine ibetha kusasa ngoLwesine.
Inyikima bekufanele ukuba ivakala ngokubanzi kubo bonke abantu abakummandla oyimbalasane.
Abasemagunyeni ePhilippines khange basikhuphe isilumkiso se-tsunami malunga nenyikima yanamhlanje
Inyikima enkulu, ubukhulu be-7.1 inyikima ihlasele kulwandle lwePhilippines, iikhilomitha ezingama-74 (46 miles) kumazantsi mpuma eMati, Filipayinzi namhlanje.
Inyikima yahlasela ngentseni ngoLwesine, nge-12 ka-Agasti 2021 ngo-1: 46 kusasa (GMT +8) ngexesha lendawo kubunzulu obunzulu be-10 km.
Ngokusekwe kwidatha yokuqala yenyikima, inyikima bekufanele ukuba ibivakala phantse kuwo wonke umntu okule ndawo. Isenokubangela ukukhanya ukuya kumodareyitha womonakalo.
Ukunyikima okuphakathi mhlawumbi kwenzeka eBobon (pop. 4,500) ebekwe kwi-64 km ukusuka kwindawo, iTibanbang (pop. 7,800) i-77 km kude, iMati (pop. 105,900) 79 km kude, Manay (pop. 20,300) 80 km kude, Sigaboy ( pop. 8,000) 81 km kude, kunye neSan Isidro (pop. 9,700) 85 km kude.
ELupon (pop. 27,200) ebekwe kwi-96 km ukusuka kwindawo ebalaseleyo, eDavao City (pop. 1,212,500) i-144 km kude, Magugpo Poblacion (pop. 233,300) 149 km kude, kunye nePanabo (pop. 84,700) i-150 km kude, inyikima kufuneka ndizive njengokugungqa kokukhanya.
Akukho ngxelo zangoku malunga nokwenzakala okanye umonakalo ngeli xesha. Akukho silumkiso ngetsunami ebesikhutshiwe ukusukela ngoku.
Kwiintsuku ezisi-7 ezidlulileyo, Filipayinzi ishukunyiswe yinyikima e-1 enobukhulu obungu-7.0, inyikima eyi-1 enobukhulu 5.1, iinyikima ezi-5 phakathi kwe-4.0 kunye ne-5.0, iinyikima ezingama-35 phakathi kwe-3.0 kunye ne-4.0, kunye ne-187 phakathi kwe-2.0 kunye ne-3.0.
Kwakukho iinyikima ezingama-56 ngaphantsi kobukhulu obungama-2.0 abantu abadla ngokuziva.